बि’बादमा मु’छिएका नायक किशोर खतिवडाद्वारा आ’त्म’ ह#’त्या प्रयास ? – News543Online
April 19, 2021 adminLeaveaComment on बि’बादमा मु’छिएका नायक किशोर खतिवडाद्वारा आ’त्म’ ह#’त्या प्रयास ?
नेपाली सिनेमाका चर्चित नायक किशोर खतिवडाले आ’त्म’ ह’*त्याको प्रयास गरेका छन् । लक्ष्मी गदाल नाम गरेकी एक युबती संग नाम जो’डिएर ब’दनाम भएका खतिवडाले आ’त्म’ह’त्याको प्रयास गरेको उनका एक जना साथीले जानकारी दिएका छन् ।
बि’बाद पछी लक्ष्मी र खतिवडाले बिवाह गर्ने सहमति भएको थियो । स
मंगलबार देखी विद्यालय अनिश्चित कालीन बन्द
म दुईवटा श्रीमान राख्न चाहान्छु, दुई श्रीमान्को बीचमा सुत्न मन छ, के मान्छ त यो समाजले ?